Ciyaarta sariirta aroorta hore la sameeyo Faa’iidada laga helo -Video Daawo | Gaaloos.com
Home » galmada » Ciyaarta sariirta aroorta hore la sameeyo Faa’iidada laga helo -Video Daawo
Ciyaarta sariirta aroorta hore la sameeyo Faa’iidada laga helo -Video Daawo
Sameeynta ciyaarta sariirta waxaa la ogaaday in midda la sameeyo aroortii ay leedahay faaidooyin badan.
Baaritaano ayaa muujinaya in lamaanayaasha is weydaarsada dareemaha kalgaceyl aroorti in ay aad uga muuqaal qurxoon yihiin kuwa aan sameyn xiligaas , sidoo kale waxa ay helayaan timo caafimaadkooda wanaagsan yihiin iyo cidiyo qurxoon.
Xiliga aroortii ciyaarta la sameeyo ayaa jirka ka dhigeysa mid fir fircoon oo aan laheyn caaajis gaar ahaan iyadoo ragga sameeya aroortii ay shaqada aadayaan iyaga oo maqsuud oo uu nuur ka muuqanayo.
Marka lagu jiro kulanka macaan ayuu jirka soo daayaa maadada kiimikada ah ee Estrogen taasi oo timaha iyo jirka ka yeelaya kuwo ifaya.
lamanayaasha sameeya ciyaarta sariirta ayuu jirkooda gubaa 300 oo tamar saacadii taasi oo ka dhalaneysa fir fircoonida iyo garaaca wadanaha halka uu hoos u dhaco cadaadiska dhiiga marka ciyaarta lagu jiro.
DAAWO MUUQAALKA XARIIFADA:
Sidoo kale kulanka macaan ee aroortii la sameeyo ayaa sidoo kale yareeya in uu kugu dhaco hergabka (Dureyga) iyadoo galmada ay ka hor tag wanaagsan u tahay hergabka iyo goon jabka ( Madaxa oo hal dhinac ka xanuuna).
Title: Ciyaarta sariirta aroorta hore la sameeyo Faa’iidada laga helo -Video Daawo